१५ दिन सम्म परिवारले लाश बुझेन, प्रहरीले किटानी जाहेरी नलिएको परिवारको दावी - Pradesh Dainik
१५ दिन सम्म परिवारले लाश बुझेन, प्रहरीले किटानी जाहेरी नलिएको परिवारको दावी
बिहिबार, फागुन ३०, २०७५ , प्रदेश दैनिक
मोरङ, मोरङको पथरीशनिश्चरे—७ का षडराज तामाङको लाश १५ दिन सम्म पनि परवारले बुझेका छैन्न । वडा नं. १ पथरीमा रहेको सिक्का बार एण्ड लन्चको तल रोडमा फागुन १६ गते राति षडराज मृत अवस्थामा फेलापरेका थिए । संका लागेका व्यक्ति उपर मृतकका परिवारले किटानी जाहेरी दिदाँपनि प्रहरीले सो जाहेरी दर्ता नै नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
षडराजको मृत्यु भएको यतिका दिन वितिसक्दापनि प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन् । विहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानको पाटोबाट कुनै आसलाग्ने जवाफ पाउन नसकेका परिवारले आफुहरु पिडित भएकाले न्याए दिलाइदिन समेत अनुरोध गरेका छन् । उनिहरुले षडराजको हाल सम्मपनि दाहसंस्कार गरेका छैन्न ।
घट्ना पश्चात इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले सिक्का बार सञ्चालक संजीव गिरी, धिरेन सुब्बा, नैना राई, साजन श्रेष्ठ, पुजन विक र मिलन श्रेष्ठलाई प्रहरी कायालयको सम्पर्कमा राखेको छ । मृतक षडराजकी श्रीमति मनिता तामाङले होटल सञ्चालकहरु र षडराजका साथिहरु सहित १० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीलाई बुझाइ सकेको बताए । सुरुमा प्रहरीले किटानी जाहेरी दिएमा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहजहुने बताएको थियो । तर किटानी जाहेरी दिदाँपनि प्रहरीले दर्ता नगरेको र किटान गरिएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा नलिएको भन्दै पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन् । यता प्रहरीले भने सुरुमा दिएको जाहेरीमा नै पछिल्लो जाहेरी पनि दर्ता हुने भएकाले एउटै दर्ता नं. हुने भन्दै किटानी जाहेरी दर्ता भइसकेको बताएको छ । किटानी जाहेरी आएको भएता पनि आरोपीत व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले भनेको समयमा उपस्थित हुनेगरी छाडिएको छ अर्थात प्रहरीले आफ्नो सम्पर्कमा मात्रै राखेको छ । किटानी जाहेरी दिनेबितिकै आरोपितहरुलाई समातिनुपर्ने षडराज परिवारले बताउदै आएको छ । तर प्रहरीले भने त्यसरी नियन्त्रणमा लिइहाल्नुपर्ने आवश्यक्ता नभएको बताएको छ ।
घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु पत्ता नलागेसम्म लाश नबुझ्ने परिवारले बताएको छ । तर घटना भएको लामो समय भएकाले मृत शरीरबाट दुर्घन्ध आउन थालेको उर्लाबारी मंगलबारे स्थित अस्पतालले बताउन थालेको पीडित परिवारले बताए । शवको पोष्ट मार्टम बी.पी.कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको थियो । पोष्ट मार्टम रिपोर्टमा टाउकोको हड्डी फुटेको आएको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका इन्स्पेक्टर कमल बजगाईले बताए । यद्यपि भिसेरा रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रनि बजगाईले बताए । किटानी जाहेरी दर्ता नभएको बारे प्रनि बजगाईले अनुसन्धनकै क्रममा रहेको बताउदै आखाएका छन् ।
पीडित परिवार भने प्रहरी कार्यालयको प्रमुख घट्नालाई होटलबाट झरेर मरेको भन्ने पार्न लागि परेको आरोप लगाउदै आएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मृतक षडाराज तामाङको पत्नि मनिता तामाङको पनि उपस्थिति थियो । तामाङले षडराज तामाङसँग विवाह गरेको सात महिना मात्र भएको थियो । मनिताको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ रहेको छ ।
सञ्चार माध्यममा समाचार आउन थालेपछि पीडित परिवारलाई विभिन्न आश्वासन दिएर मिल्न दवाव दिदै आएको पीडित परिवारले बताए । पीडित परिवारलाई नगद आठ लाख दिने मुद्धा दर्ता नगर्न आश्वासन दिदै आएको बुझिएको छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरका जनप्रतिनिधिहरु र विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेताहरु पनि पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा इलाका प्रहरी कार्यालयमा भीड लाग्न थालेको पीडित आङ्रिता तामाङले बताइन् । हामीले मुद्धा दार्ता गर्ने भनेपछि तापाईहरुको सहयोग गर्न आएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु र नेताहरु इलाका आउछन् । तामाङ भन्छिन ‘हामीलाई सहयोग गर्ने भन्छन तर, मुद्धा दर्ता नगर्नु भन्छन हामीले कसरी बुझ्ने ? उनिहरु हामीलाई सहयोग गर्न आएका हुन की बारका मालिकहरुलाई बचाउन आएका हुन् ?’
मृतकका दाजु ज्ञानु तामाङ विदेशबाट भाइको निधन भएको केही दिन पछि मात्रै आएका हुन् । आफूलाई न्याय दिन कोही नलागेको भन्दै ज्ञानुले पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे । दिदी टिका तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा आशँु झार्दै भनिन् ‘हामीलाई सहयोग गर्ने कोही भएन्न ।’ पत्रकार सम्मेलनपछि होटल सञ्चालकका आफन्तहरु र केही जनप्रतिनिधिहरुले पीडित परिवारलाई धाकधम्की दिएको बताए । किन पत्रकार सम्मेलन गरेको भनेर प्रश्न गर्ने गरेको, तिमिहरुलाई हामीले सहयोग गर्छौँ भनेकै छ, कस्ले उचाल्दै छ तिमिहरुलाई ? भन्ने गरेको षडराजका दाजु ज्ञानु तामाङले बताए ।